Ny fiakaran'ny SMB mandroso | Martech Zone
Alakamisy 8, 2012 Douglas Karr
Ampahany amin'ny fanekena ny fahafaha-manao marketing dia ny fahafantarana ny fampiasan'ny mpanjifanao ny vokatrao sy ny serivisy omenao. Ny mpiasanay dia miova tanteraka amin'ny sehatry ny orinasa kely sy salantsalany (SMB). Raha manompo an'ny SMB ny orinasanao dia mila mahazo antoka ianao fa ny hery miasa any lavitra sy fiaraha-miasa fitaovana Azo ampiasaina amin'ny fampiasana tanteraka ny vokatrao sy ny serivisinao.
Raha B2C ianao dia fantaro fa miova ny ora fiasana ary miova ny fahazarana mividy. Na dia manompo ny mpanjifa mandritra ny andro sy ny faran'ny herinandro aza ny fivarotana antsinjarany, ny ecommerce dia misahana ny ora rehetra. Raha tsy manararaotra an'ity fanovana fitondrantena ity ianao dia tsy hahita.
Nandritra izay taona faramparany izay dia nahita fiakarana amina vondrona vaovao iray an'ny SMB izahay - ny "Progressive SMB", fikambanana izay miha miditra hatrany amin'ny faritanin'ireo mpifaninana aminy lehibe kokoa. Fa inona no mahatonga ny SMB handroso? Avy amin'ny sary n'ny Cisco, Ny fiakaran'ny SMB mandroso.
Tags: fiaraha-miasaorinasa antononyfandraharahana madinikasmbteknolojiampiasa
Lahatsary Media sosialy 2013
8 Nov 2012 tamin'ny 12:59 PM
Manaiky ny hevitrao aho, saingy tsy hoferako amin'ny B2C, B2B dia miatrika toe-javatra mitovy.
8 Nov 2012 tamin'ny 1:16 PM
Infograf mahafinaritra sy fahitana mahafinaritra momba ny fiovan'ny teknolojia sy ny fiaraha-miasa. Hijery ny bika rehetran'ity matoanteny ity eo amin'ny Raki-bolana Volapoky eto amin'i Wikibolana. Heveriko fa mahaliana ny fomba fiainan'ny mpiasa vaovao amin'ny Internet sy amin'ny tena fiainana miaraka aminy, misy dikany fa tadiavintsika ny fanalefahana, ny firotsahana ary ny fivezivezena mitovy amin'ny tontolon'ny asany.
9 Nov 2012 amin'ny 5:08 maraina
Infographic mahafinaritra! Mahafantatra zavatra betsaka momba ny SMB mandroso ..
9 Nov 2012 amin'ny 5:28 maraina
Lahatsoratra iray hafa tsara tamin'ny alàlan'ny sary. Misaotra infographic ary ho anao Douglas. Tena mahavariana raha tsy maintsy apetrakao amin'ny alàlan'ny sary an-tsaina izay tianao hambara momba ny foto-kevitrao. Ary minoa ahy, mahomby izy io noho ny fametrahana azy rehetra amin'ny fehintsoratra maro ary vakio.